Kuuriyada Woqooyi - Meesha ugu dambeyso ee ciyaar loo aado - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka BFC Media
Image caption Erik Paartalu (bidix) wuxuu 14 sano ka ciyaarayay Australia.
In loo safro dal aan loo safrin kaas oo xilligan dhex dabaalanayo xiisad caalamka ka taagan ee nukleerkooda la xiriira. Ma ahan mid fudud oo kubad lagu ciyaari karo.
Koox ka dhisan dalka Hindiya oo lagu magacaabo Bengaluru FC ayaa isbuucii tagay u safartay magaalada Pyongyang oo ay kula ciyaarayeen kooxda dalkaasi, kullan ka mid ah horyaalka Aasiya.
Marka laga tago ciyaarta, waxaa ka lumay qaar ka mid ah alaabtooda, waxayna walwal ka qabeen waxa ay ka garanayaan hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Kim Jong-un, iyo gantaalkii ugu dambeeyay ee dalkaasi uu tijaabiyay.
Trump: "Mareykanku wuu burburin doonaa Kuuriyada Waqooyi"
BBC ayaa wareysatay ciyaaryahanka dhexda uga ciyaaro kooxdaasi Erik Paartalu, wuxuuna ka sheekeeyay wixii uu soo arkay.
"Maalintii ugu dambeysay ee safarkeena, gantaal ayaa dul maray hoteelkaan deganayn, wax la barbardhigi karo ma jiraan," ayuu yiri.
'Talaabo aan la garaneyn'
Lahaanshaha sawirka Erik Paartalu
Image caption Erik Paartalu ayaa bartiisa Twitterka ku qoray farriintan
Bengaluru ayaa ku badisay 3-0, kullankii koobaad ee ciyaarta oo Hindiya lagu qabtay. Kullanka Pyongyang wuxuu ku dhammaaday barbardhac.
Ciyaaryahan Erik wuxuu aad uga walaacsanaa safarka, wuxuuna dadka waydiinayay in meesha ay tahay dal lagu nabadgali karo.
Laakiin guddiga tartanka qabanaya ayaa wafdi hordhac ah u diray Pyongyang si ay u soo ogaadaan in ciyaaryahanada ay safarka aadi karaan. Waxayna sheegeen in dal nabad ah uu yahay.
"Waxay noqon kartaa ciyaar ka dheceyso meel dagaal uu ka socdo ama aan deganeyn, balse Kuuriyada Waqooyi sidaas way ka duwan tahay," ayuu yiri Paartalu.
"Dowladda Australia ayaa shacabkeeda uga digtay in aysan u safraan Kuuriyada Waqooyi. Safaarad ama qunsuliyad ay leedahay Australia kuma taallo Kuuriyada Woqooyi.
Ciyaaryahanka ayaa yiri: "Markii aan gaarnay, waxay inoo ahayd howl, ka hor inteynaan soo safrin, waxay inoo ahayd meel aan la aqoon".
Waxay Pyongyang gaareen 48 saacadood ka hor ciyaarta, waxayna sii mareen Beijing.
Boorsooyiinka lumay iyo walaac dhanka socdaalka ah
"Markii aan gaarnay, waxaa inoo furmay indhaha," ayuu sheegay Paartalu, kaas oo horey uga soo ciyaaray Shiinaha, Qadar iyo Kuuriyada Koonfureed.
"Wax kasta oo aad aragto ama maqasho way ka duwan yihiin waxa aad wararka ku aragto. Layaab ayay ahayd in aan ka degnay garoon u muuqday meel eber ah.
"Wuxuu ahaan jiray garoon caalami ah, laakiin hal diyaarad oo keli ah ayaa soo degtay. Waxaan ku jahwareernay meesha ay jiraan boorsooyiinkeena, laba saacadood ayaan ku sugnayn garoonka. Shaqaalaha way bexeen, layrarkana waala demiyay. Keligeen ayaa ku sugneyn eelaboorka."
Kooxda waxaa laga qaaday mobile-lada iyo qalabka kale si loo baaro, baagaggooda ayaa la baaray sidoo kale. Waxaa loo sheegay in ay ka feejignaadaan waxa ay sawirayaan inta ay Pyongyang ku sugan yihiin.
"Waxa layaabka leh waxay ahayd in qofkaste WhatsApp loogu soo diray muuqaal looga shactireysanayo Kim Jong-un. Markaan soo safreynay qofkaste wuu iska tiray. Garoonk markaan soo gaarnay waxaan ka baqeynay in qof inaga mid ah la qabto".
"Waxaan ka baqayay in Twitter-ka laga isticmaalo North Korea. Waxaan kaga shactireystay Kim inaan cabitaan lawadaagi doono."
Inta badan boorsooyiinkooda ayaa lumay, waxayna waayeen kabihii ay ku ciyaari lahaayeen. Waxay ku qasbanaadeen in ay kabo cusub ka gataan Hotelka. "waxaa la iibinayay $150-$200 kabo aan wanaagsanayn".
'Waxaad waydiineysaa wixii aad ogtahay'
Image caption Tababare ku xigeenka Bengaluru Carles Cuadrat (bidix) iyo tababaraha Albert Roca (midig). waxaa gadaashooda ka muuqdo hotelkii ay deganaayeen
Telefoon maysan haysan, internet-kana looma ogolayn intii ay ku sugnaayeen Kuuriyada Woqooyi.
"Markaan hoteelka gaarnay fiidkii, waxaan la yaabnay mugdiga jidadka," ayuu yiri. "Qof ayaa inoo sheegay in nalalka la demiyay si Pyongyang aan looga arkin dayaxgacmeedka.
Paartalu, wuxuu yiri: "Markii aan gaarnay hotelka, waxaan aragnay xaalad la mid ah tan caalamka. Qolka waxaa yaallo TV-ka laga daawado Kim Jong-un. "dacaayadda waxay billaabaneysaa islamarka aad gasho dalkaasi."
"Pyongyang waxaa ku nool 2.6 milyan oo qof.
Image caption Ciyeertoyda Bengaluru FC waxaa loo ogolaaday inay meelaha qaar booqdaan
Looma ogoleyn in ay hoteelka ka baxaan. Waxaa la siiyay warqad ay ku qorantahay shuruucda dalka ee haga tallaabo kaste oo ay qaadayaan.
"Dadku way fiican yihiin. Qofkaste waa inuu qoorta surto calanka dalka ama sawirka qoyska dalka maamula," ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka Bengaluru FC
Image caption Garoonka cavernous May Day wuxuu qaadaa 150 kun oo qof
Ciyaarta waxaa lagu qabtay garoonka wayn ee May Day, laakiin Paartalu wuxuu sheegay in qiyastii 8-9 kun oo qof ay ciyaarta daawanayeen.
Wuxuu sheegay in xilligii nasashada "Caruur gaaraya illaa boqollaal ayaa sacab iyo ciyaar ku sameynayay garoonka dhexdiisa".
"Waxaan diiradda saarnay wixii aan sameyneynay, weerar iyo weerar celin. Ujeedada waxay ahayd inaan guul gaarno. Kooxdooda aad ayey u fiican yihiin, qalabkoodana wuu u dhameystiran yahay".
'Xilligaan cadaabtaas ka baxeynay'
Image caption Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un oo daawanaya gantaal la tijaabinayo
Ciyaarta waxay dhacday Arbacadii, 13-kii September. Ka dib waxaa loo diiday in ay dalka ka baxaan illaa laba maalmood. Tababarro ayey iska sameynayeen, sida uu Paartalu sheegay.
Jimcihii waxay ku soo tooseen warka sheegayo in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal caag ah oo dul maray Japan.
Paartalu wuxuu yiri: "Waxaan daawaneynay lix kanaal oo ay ka mid yihiin mid Shiinaha laga leeyahay iyo Al Jazeera. Waxay baahinayeen in Pyongyang laga riday gantaal 6-dii aroornimo".
"Intaan ku guda jirnay inaan hoteelka ka soo baxno, qof ayaa inoo sheegay, haddaan hoteelka duleedkiisa istaagi lahayn waan arki lahayn gantaalka oo maray hoteelka dushiisa. Waxaa laga riday Garoonka diyaaradaha, qof kastana wuu arki karay".
Image caption Bengaluru FC way ku faraxsanaayeen ciyaarta
"Intaan is eegnay ayaan dhahnay, halkan si degdeg ah aan uga cararno. Aan ka baxsano naarta halkan ka shidan", ayaan ku sheekeysanay, ayuu yiri Paartalu.